Nzira yekunyora SEO kuongorora kambani yekambani?
Pane chimiro chekuti vose vanokunda makambani ekudhinda ari kushanda. Vane ruzivo vatengesi vekuInternet vanogadzirisa hurongwa hwavo mukubatana nevateereri vanotarirwa. Mamwe makuru makuru emabhizimisi kunyange ane kambani yeP PR yakakosha yekugadzirisa nzira dzekudzoka zvakare kuitira kuvandudza mararamiro avo paInternet nekukwevera vatsva vanokwanisa. Chinangwa chekutanga chekushandurudza mishandirapamwe yekutsvaga ndechekuvandudza kushandurwa kwewebsite nekuzivikanwa kwechiratidzo kuburikidza nekupindura kune manzwi evanhu.
Iri basa rakaoma uye rakaoma kuita shanduko-yakagadzirika uye yakasununguka mhinduro sezvinoreva shoko rimwe nerimwe, mutemo uye ndima zvinogona kuvandudzwa kana kuti zvimwe zvinoparadza marashiro ako. Iwe unotora yako SEO kambani dzinoongororwa kwete chete kune yako yazvino makasitendi asiwo kune vanotarisira vatengi vanozoshandura pane mushumo wenyu unoita kutsvaga.
Pane mitemo yakawanda uye mazano iwe unofanirwa kufungisisa usati watanga mhinduro. Zvechokwadi, vatengesi vane ruzivo uye vamiririri veRP vanogona kuita basa iri zvishoma nezvishoma. Zvisinei, kana iwe usine kunzwisisa kwakakwana kwezvinhu zvose zvekutengesa, mazano anotevera achauya akakodzera kwauri munguva yekugadzira SEO kambani dzinoongorora. Nokutevera mutungamiri wedu mutsva, iwe uchakwanisa kuumba maonero akanaka, kutendeuka-kudzidzisa pamusoro pehurumende yako uye kuita kuti vashandi vako vave vakavimbika kune marashi yako.
Mazano ekuumba mararamiro eSeO yerimwe nyanzvi
Iko-yepamusoro yemashoko anokosha keywords
Kana uchida kuyanana nevatengi vako zvinobudirira, unoda ziva nzvimbo yako yekutsvaga magwagwa uye uone kubva pane zvinoonekwa nevatengi. Kuti uone zvaunogona kutenga vatengi, unofanirwa kusarudza zvakakosha uye nezvekuwana-inowanikwa mazwi makuru uye tsvakurudzo yako niche yemisika. Uyezve, unofanirwa kutarisa kuburikidza newewebsite inowanikwa peji yekutanga yekutsvaga. Kuti uite sarudzo yekukunda, iwe unoda kuziva kuti vashandi vako vanogona sei kuwana nzvimbo yako pakati peimwe nzvimbo dzakabatana. Sokutengeserana kwema digital haisi yakasimba uye inogara ichichinja, unofanirwa kuva wakagadzirira kushandisa nzira yakajeka yekugadzirira. Iwe unofanirwa kuenderera mberi nekucherechedza kuchinja kwehutano hwako hwemakambani maitiro kuti ave akagadzirira kuita pakarepo. Iwe unogona kubatsirwa nokushandisa zvimwe zvishandiso zveIndaneti zvakadai seTransTrackers kuti utaure kugadzirisa pasi pemamiriro acho ezvinhu.
Batisisa nzira yekutengeserana-13
TripAdvisor, Yelp uye nezvimwe zvakadaro, iva nechokwadi chokuti unyorera mutin'i-kutengesa. Kutanga pane zvose, kuongorora kwako kunofanira kutaurwa pane zvinotarisirwa nevatengi nemibvunzo pamwe chete nemakorokota. Iwe unofanirwa kugovera yako ikozvino uye vanotarisira vatengi vane ruzivo rwehutano pamusoro pebhizimisi rako kuti uite kuti vatevere ruzivo rwako rwekutanga. Iva nechokwadi chekuti iwe unogadzira kuongorora kwako mumutauro wakanaka uye unoita. Ndinokukurudzira kuti udzivise chero ruzivo, mazwi asina musoro kana maonero ezvematongerwo enyika. Zvinogona kuita kuti vashandi vasapindure. Kudzokorora kwako kunofanira kunge kwakadzidza zvikuru, kwakarongeka zvakanaka uye kutengesa kuitisa. Iwe unofanirwa kugovera mazano kune vaenzi vako vepawebsite, uchivaudza kuti mupiki wako mushandi kana basa. Uyezve, kana iwe uchipa vaverengi nehuwandu hwemashoko pamusoro pekubudiswa kana kutengeswa zuva rezvitsva zvenyu, iwe uchangoerekana wanyanya kukosha kwekupindura uku Source .